ဓမ္မလက်ဆောင် APK ~ မိုးညိုသား
မန်ဘာတို့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် App လေး တစ်ခု ကို ဝေမျှပေးလို့ပါတယ် !
သိပြီးတဲ့လူလည်းရှိသလို မသိတဲ့လူလည်း ရှိမှာပါပဲလေ !
အခုကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရှိထားသင့်တဲ့ App လေးပေါ့ !
ဘုရားရှိခိုး မေတ္တာပို့ အမျှဝေ ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် ပဌာန်းတရားတော်
အခြားထင်ရှားသည့် ဂါထာမန်တန်တွေ စုစည်းထားသော App လေးပါ !
ဒါလေးကိုတော့ မြန်မာများအတွက်ဖေ့စ်ဘုတ် အခမဲ့ဖွင့်ပေးမည် ကနေ မလာတာပါ
မြန်မာများအတွက်ဖေ့စ်ဘုတ် အခမဲ့ဖွင့်ပေးမည် မှ Admin # KST ကိုလည်း credit ပေးပါတယ်